Ukhangele i-Oral - aasraw
/Iziphumo zophando ze "Oral"
isikhundla 03 / 24 / 2019 阿斯劳
IMethasterone (Superdrol) 1. Yintoni iMethasterone (Superderol)? 2. Zeziphi iimveliso eziqukethe i-Methasterone powder? 3. IMethasterone Half Life 4. Ixesha lokuFumanisa iMethasterone 5. Ukusetyenziswa kweMethasterone kwezonyango 6. IziBonelelo zoKwakha iMethasterone 7. IMethasterone VS Dianabol 8. IMethasterone VS Anadrol 9. Umjikelo weMethasterone neMethasterone Isikali 10. Isiphumo seMethasterone 11. Iziphumo zeMethasterone ezi-12 […]
isikhundla 12 / 17 / 2017 阿斯劳
I-Oral turinabol powder: Ngaba uyazi iinyani malunga ne-steroid powder? I-aasraw ibhlog yokukhangela 1.Yintoni i-Oral Turinabol? Imbali ye-2 yomlomo we-turinabol powder 3.Yintoni i-Oral turinabol powder? 4.Yintoni eqhelekileyo evela kwi-Oral turinabol powder? 5.I-Oral turinabol isebenza njani? 6.Izibonelelo ze-Oral turinabol yokwakha umzimba 7.Zeziphi izibonelelo ze-Oral turinabol? 8.I-turalabol yomlomo kunye […]
imveliso 01 / 21 / 2022 阿斯劳
I-Pterostilbene powder yikhompawundi ye-phenolic yendalo efumaneka kwizityalo ezininzi (Njengomthi we-kino, okanye umthi wegazi ledragoni), iziqhamo, imifuno kunye namandongomane. Izifundo ezahlukeneyo zibonise i-Pterostilbene powder inenzuzo yangaphambili yeklinikhi kwi-cholesterol, uxinzelelo lwegazi, kunye noxinzelelo lwe-oxidative. Njengoko uphononongo lufakiwe, i-Pterostilbene powder inezibonelelo zempilo ezinokubakho, ibonakala imithombo emininzi ye-Pterostilbene (isixa) somvelisi/ifektri ethengisiweyo njengezongezo zokutya.
imveliso 01 / 20 / 2022 阿斯劳
I-Resveratrol powder yi-stilbenoid polyphenol kunye ne-phytoalexin eveliswa kwizityalo ezininzi, kubandakanya iidiliya, iiblueberries, amaqunube, iimulberries, kunye namandongomane. I-resveratrol ifumaneka kakhulu kwiwayini ebomvu.
Ikakhulu zakhiwe ngamalungu endalo kwaye zinokubhekiswa njenge-micronutrient, eyona nto ifunekayo ukuze uphile. Xa abantu bethetha ngeenzuzo zezempilo zesityalo, bathetha kakhulu ngezi polyphenols, ezifana ne-stilbenoids.
Oku kuthetha ukuba i-Resveratrol powder ayinakukunceda kuphela ukukhupha umzimba wethu kwii-radicals ezinobungozi ezinokuthi zikhokelela kumonakalo weselula kodwa izongezelelo ze-resveratrol zibandakanya ngakumbi njenge-polyphenol yokutya kwizifundo zeklinikhi ukufundisisa okunokwenzeka "njenge-anti-aging" kunye "no-anti-obesity. ” i-bioactive yokusetyenziswa konyango.